Sintomy ny PBY Catalina FS2004 natambatra
Tsara hafa add-on ho an'ireo mpankafy ny Ady Lehibe Faharoa, inona koa, ranomasina ranomasina io. Misy modely roa misy miaraka amin'ny endrika folo. Izy io dia fandoavam-bola taloha add-on ankehitriny maimaimpoana noho ny fifalianao.
Ny mivaingana PBY Catalina i Amerikana manidina sambo ny 1930s sy ny 1940s vokarin'ny mivaingana Aircraft. Izany no iray amin'ireo maro be mpampiasa indrindra-anjara fiaramanidina ny Ady Lehibe II. Catalinas nanompo isaky ny sampan 'ny United States Tafika sy ny rivotra hery sy ny navies ny maro hafa firenena.
Nandritra ny Ady Lehibe II, PBYs no ampiasaina amin'ny ady manohitra ny sambo mpisitrika, fisafoana baomba, fiara Escorts, fikarohana sy famonjena misiona (indrindra fa ny rivotra-dranomasina famonjena), sy ny entana fitaterana. Ny PBY no maro indrindra fiaramanidina ny ny karazany avy, ary ny farany mavitrika miaramila PBYs tsy misotro ronono amin'ny fanompoana mandra-1980s. Na dia amin'izao fotoana izao, mahery 70 taona taorian'ny sidina voalohany, ny fiaramanidina mbola manidina tahaka ny waterbomber (na airtanker) amin'ny asa famonoana afo avy eny ambony manerana izao tontolo izao.
Ny fanondroana "PBY" dia nofaritana mifanaraka amin'ny rafitra fananganana fiaramanidina amerikana an'ny 1922; PB izay misolo tena ny "Patrol Bomber" sy Y no kaody natokana ho an'ny Consolidated Aircraft ho mpanamboatra azy. Catalinas namboarin'ireo mpanamboatra hafa ho an'ny tafika an-dranomasina amerikana dia notendrena araka ny kaody mpanamboatra isan-karazany, ka ny ohatra namboarina avy any Vickers kanadianina dia voatondro PBV, ohatra Boeing-Canada PB2B (efa nisy Boeing PBB) ary ohatra an'ny Naval Aircraft Factory no voatondro PBN. Catalinas kanadianina dia nantsoin'ny tafika an-tserasera Royal Canada ho Canso, mifanaraka amin'ny fanao nomen'ny British ankehitriny anarana hoe seraplanes aorian'ny tanàna amoron-tsiraka, amin'ity tranga ity ho an'ny tanànan'i Canso any Nova Scotia. Ny RAF kosa mifanohitra amin'izany dia nampiasa ny anarana Catalina. Ny tafika an'habakabaka amerikana ary ny tafika an'habakabaka amerikana dia nampiasa ny anarana hoe OA-10. (Wikipedia)